Faahfaahin Umadaha midoobay oo Koonfurta Suudaan u direyso 17kun askari oo kuwo Soomaali ah ku jiraan | Somalisan.com
Home Afsomali Faahfaahin Umadaha midoobay oo Koonfurta Suudaan u direyso 17kun askari oo kuwo...
Faahfaahin Umadaha midoobay oo Koonfurta Suudaan u direyso 17kun askari oo kuwo Soomaali ah ku jiraan
Xukuumadda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ciidamo u dirto amniga iyo kor u qaadista nabadda ee Koonfurta Suudaan, halkaas oo saraakiisha iyo kooxaha mucaaradka ah ay dhawaan saxiixeen heshiis si loo soo afjaro dagaal shan sano ah.
Qoraalkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii Hay’adda Dhisme Gobollada Horumarinta, oo ah degmo goboleed, ay soo jeedisay in Soomaaliya iyo waddamo kale oo dhowr ah loo oggolaado in ay gacan ka gaystaan ​​Koonfurta Suudaan ee wada jirka ah.
Isagoo ka hadlaya Muqdisho, Wasiirka Waxbarashada ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Jabir, ayaa sheegay in waddanku uusan ka waaban doonin inuu askari u diro Koonfurta Suudaan.
“Qaar ka mid ah way waydiin karaan sida ay suurtagal u tahay waddan sida Soomaaliya oo kale, oo ka soo baxa colaadda iyo colaadda, waxay gacan ka gaysan kartaa ciidan nabad ilaalin ah. Maxay naga joojinaysaa in aan ka qaybqaato? “Ayuu yiri, isaga oo sheegay, in la tixgelinayo in Burundi ay u dirtay ciidan iyo gargaar si ay Soomaaliya u dagaalamaan. “Maxay naga joojinaysaa in aan ka qaybqaato dhismaha nabadeed ee qaybo kale oo ka mid ah Afrika halkaas oo uu jiro khilaaf?”
Ujeedada UN. ee Koonfurta Suudaan waxay leedahay 17,000 oo askari oo lagu soo oogay ilaalinta rayidka, abuurista waddo nabdoon oo ku aaddan bixinta gargaarka bini’aadanimo, iyo kormeerka iyo baaritaanka xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Laakiin Amnesty International waxay ku eedeysay ciidamada South Sudan iyo kooxaha xagjirka ah inay sameeyeen xadgudub baahsan oo loo geystay dad rayid ah.
IGAD waxay soo jeedisay in Suudaan, Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti lagu daro ciidamada nabad ilaalinta ee Koonfurta Suudaan si ay gacan uga geystaan ​​dhisidda nabadda iyo horumarinta amniga.
Laakiin George Musamali, oo ah Agaasimaha Xarunta Risk Management ee Afrika, oo ah la-talin dhinaca amniga ah, ayaa sheegtay in IGAD ay isku dayayso in ay bixiso aragtida ah in Soomaaliya ay xasilisay.
“Waxay la ciyaarayaan maskaxda dadka” iyagoo soo jeedinaya in Soomaaliya ay tahay mid xasilloon oo awood u leh in ay gacan ka geysato ciidammada meelaha kale ee kulul, ayuu yidhi. “Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay fikrad qalad ah, sababtoo ah dhammaadka maalinta, al-Shabaab wali waa ay sii fiicnaanayaan.”
Soomaliya iyo dawladooda ayaa ku jira ilaalinta 22,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika kuwaas oo, iyagoo gacan ka helaya askarta dowladda Soomaaliya, ay la dagaalamaan xagjiriinta al-Shabaab kuwaas oo ku hanjabay in ay hannaan dawlad caalami ahaan aqoonsan.
Qaramada Midoobay waxay leedahay in ka badan daraasiin hawlo nabad ilaalin ah oo adduunka ah, iyada oo in ka badan kala badh ay ku jiraan Afrika. Sanadihii la soo dhaafey, waddamada xooga yar ee Afrika waxay gacan ka geysteen howlgalka nabad ilaalinta ee dalalka wadamada iskahorimaadka ah sida Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Laakiin Musamali wuxuu sheegay in Soomaaliya aysan diyaar u ahayn in ciidamo loo isticmaalo bannaanka xudduudaha. Dhab ahaantii, waa in aan kor u qaadno tirooyinka iyo isla markaa iyaga si fiican u qalabayn si ay wax uga qabtaan dhibaatada xudduudahooda. “
Next articleHirshabelle State Resumes Cooperation With Federal Government
Muraxii ugu horeeyey ee iscasila o noqday Cabdullaahi Cali Xasan
VIDEO Aqalka Sare Somalia Oo Munasibad Sagootina U Sameyay Safiirka Turkey Muqdisho
Somalisan News - November 16, 2018
“ Xabsigan Boorama iyo kuwa kale ee dalkaba Waxa Ku Soo Kordhay Maxaabiis Badan,...
Somalisan News - June 11, 2017